David De Gea Oo Maamulka Man United U Sheegay 3 Xiddig Oo Uu Doonayo In Ay La Soo Wareegto Si Uu Heshiis Cusub Ugu Saxiixo – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta David De Gea Oo Maamulka Man United U Sheegay 3 Xiddig Oo Uu Doonayo In Ay La Soo Wareegto Si Uu Heshiis Cusub Ugu Saxiixo
David De Gea Oo Maamulka Man United U Sheegay 3 Xiddig Oo Uu Doonayo In Ay La Soo Wareegto Si Uu Heshiis Cusub Ugu Saxiixo
Goolhayaha kooxda Man United ee David De Gea ayaa kooxdiisa u sheegay in ay suuqa xagaaga u dhaqaaqdo saddex xiddig oo uu aaminsan yahay in ay kooxda wax weyn u soo kordhin karaan xilli ciyaareedka dambe si uu isaguna heshiiska cusub ugu saxiixo kooxda.
Sida laga soo xigtay wargayska Don Balon Goolhayaha reer Spain ayaa doonaya in ay kooxdiisu u dhaqaaqdo xiddigaha Miralem Pjanic, Paulo Dybala & Samuel Umtiti marka la gaaro suuqa kala iibsiga xagaaga.
De Gea ayaa si joogto ah loola xiriirinayay kooxda Real Madrid xilli uu heshiiskiisa haatan dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedka dambe kana mid yahay bartilmaameedka ugu weyn ee madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez.
Waxa jira heshiis hal sano ah oo dookh ah laakiin Red Devils ayaa doonaysa in ay xiddigeeda ugu muhiimsan sii haysato sanado badan.
Man United ayaa la filayaa in ay xagaaga u dhaqaaqdo xiddigo cusub oo ay doonayso in ay ku xoojiso iyada oo si weyn loo filayo xiddiga reer Argentine ee Paulo Dybala kaas oo ay doonayaan in uu la tartamo xiddigaha Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez.
Si kasta ha ahaatee De Gea oo ka mid ah goolhayayaasha ugu fiican adduunka oo ay adagtahay in ay badalkiisa hesho ayaa u sheegay in ay Dybala soo raaciyaan xiddigaha Umtiti & Pjanic si uu mustaqbalkiisa ugu hibeeyo.